५ राम्रा बंगलादेशी फिल्म, अंग्रेजी... :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, जेठ १६
'थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर' फिल्मको दृश्य।
सिनेमा, साहित्य र संगीतमा बंगाली समुदायको ठूलो नाम छ। सत्यजीत रे, विमल राय, ऋतिक घटक, ऋतुपार्नो घोष, अपर्णा सेन आदि केही प्रतिनिधि नाम हुन्। तर वर्तमान बंगलादेशी नागरिकका लागि ती नाम राजनीतिक हिसाबले पराइ देशको नामसरह भएको छ।
बंगलादेश, भारत विभाजनपछि पूर्वी पाकिस्तान नाम दिइएको भूगोलका मान्छेहरूले विद्रोह गरेर बनाएको नयाँ देश हो। बंगाल सभ्यताको इतिहास केही शताब्दी परसम्मै तन्किए पनि सन् १९७१ मा जन्मेको बंगलादेशले धेरै कुरा फेरि नयाँ शिराबाट सुरू गर्नुपर्‍यो।
गरिबी, अनिकाल, राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक घटनाक्रमका बीच अन्य क्षेत्रजस्तै यहाँको सिनेमा क्षेत्र पनि पिल्सिएको छ।
बंगलादेशको सिनेमा क्षेत्रको मूल्यांकन यही सन्दर्भमा गर्दा धेरै उत्साहजनक नदेखिनु पनि अस्वभाविक लाग्दैन। यद्यपी, मसालेदार सिनेमासँगै यहाँ स्वतन्त्र सिनेमा निर्माणका केही सार्थक प्रयासहरू भएका छन्।
यो सूचीमा हामीले युट्युबमा उपलब्ध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाउन सफल बंगलादेशका पाँच फिल्म समेटेका छौं।
अल्फा (२०१९), निर्देशक: नशिरुद्दिन युसुफ
यो रिक्सा पेन्टर अल्फाको कथा हो। ताल छेउ बाँस ठड्याएर बनाएको घरमा उनी एक्लै बस्छन्। तर उनी बस्ने झोपडपट्टी क्षेत्रका मानिससँग उनी नजिक छन्। पेन्टिङको समयमा बाहेक उनी बाँसुरी बजाएर वा ध्यान गरेर समय बिताउँछन्। सानोमा सडकमा हराएको अल्फालाई खेलौना बनाएर बेच्ने पसलेले हुर्काएका हुन्छन्। अल्फालाई हुर्काउने उनका बुबा कर्फ्युको समयमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिएका हुन्छन्। जुन घटनाले उनलाई सपनामा पनि झस्काइराख्छ।
सपनामा शव देख्ने अल्फा बस्ने तालको किनारमै एक दिन शव देखा पर्छ। त्यो घटनाले उनको मानसिकता खलबलाउँछ। लाससँग अनौठो संवाद गर्न थाल्ने अल्फाको जीवनमा र फिल्मको कथामा त्यो लासले कस्तो अर्थ राख्छ? यो रोचक छ।
फिल्मले अल्फासँगै झोपडपट्टी क्षेत्रका पात्रहरूको कथा पनि भन्छ। स्वैरकाल्पनिक र रहस्यमयी 'अल्फा' कथावाचन शैली र 'भिजुअल ट्रिटमेन्ट'का हिसाबले राम्रो छ नै, मानवीय संवेदना र सामाजिक पाटोबाट पनि महत्वपूर्ण छ। यसले ढाका सहरभित्रका सीमान्तकृत सडक बालक र तेस्रो लिंगी समुदायका पात्रको संघर्षसँगै अपराधका घटना पनि देखाएको छ।
मुख्य पात्रको भूमिकामा अलामगिर कबीरले सामाजिक बेथितिबाट विचलित बनेको कलाकारको भूमिकामा राम्रो अभिनय गरेका छन्। अल्फाकै आँखाबाट फिल्मले वर्तमान बंगलादेशी मान्छेको जीवनको मूल्य र अस्तित्वको कथा भन्छ।
उधाओ (२०१२), निर्देशक: अमित असरफ
चुनाव जितेर शक्तिशाली बन्ने सपना देखिरहेको बेला चुनावी उम्मेदवार अकबरको अपहरण हुन्छ। उनको अपहरण दिनभर स्कुलको रिक्सा चलाउने काम गर्ने बाबुले गरेका हुन्छन्। बाबु आफूलाई धनीको विपक्षमा र गरिबको पक्षमा काम गर्ने पात्र रबिन हुडजस्तै हिरो ठान्छन्। सुन तस्करीको काम गरेर राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने अकबरलाई अपहरण गर्ने जोखिम मोल्नुमा भने बाबुसँग अन्य कारण पनि हुन्छन्।
बाबुले अकबरलाई अपहरण गर्नुको कारण के होला? अकबरको विगत के हो?
अकबर अपहरणमा परेपछि उनका मुख्य मान्छे खोजीमा निस्कन्छन्। बाबुले अपहरण गरेर अकबरलाई कहाँ लैजान्छन् र के-के गर्छन् भन्ने कुरा नै फिल्मको मुख्य रमाइलो पक्ष हो। व्यक्ति मार्फत समाजकै कथाको प्रतिनिधित्व गर्ने यो फिल्मको मुख्य विशेषता भने कथा भन्ने शैली र यसको प्रयोगाशीलतामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा चर्चा र पुरस्कार पाएको यो फिल्मले दर्शकलाई प्रस्तुति र दृश्य संयोजन दुवै हिसाबले राेमाञ्चित बनाउने सामर्थ्य राख्छ।
अमेरिकाकाे न्यूयोर्क विश्वविद्यालयबाट ग्राजुएट अमित अश्रफले फिल्ममा मेहरको कथामा उनको घरमा काम गर्ने महिलाको वास्तविक घटनामा थपघट गरेर बनाएका हुन्।
फ्ल्यासब्याक, विम्बात्मक दृश्य र विधाअनुसारको पार्श्र्व संगीतले फिल्म सुन्दर बनेको छ। कथालाई रहस्यमयी बनाउन फिल्ममा बाबाजी र माछाका प्रसंग आउँछन्। उत्कृष्ट सिनेमाटोग्राफी फिल्मको अर्को सशक्त पाटो हो। फिल्ममा अपहरण गर्ने र अपहरित पात्रको भूमिकामा दुवै मुख्य कलाकारले राम्रो अभिनय गरेका छन्।
रनवे (२०१०) निर्देशक: तारेक मसुद
बंगलादेशी समाज र त्यहाँका मान्छेको वास्तविक जीवनसँग नजिकको विषय बोकेको 'रनवे' मसुदको अर्को महत्वपूर्ण र चर्चित फिल्म हो। यो फिल्म जीवनमा लक्ष्य खोज्दाखोज्दै भड्किएको युवक राहुलको कथा केन्द्रमा छ।
निम्न वर्गीय परिवारको राहुलको घर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे नजिकै छ। मध्यपूर्वी देशमा काम गर्न गएका उनका बुबाको खबर नआएको लामो समय भइसक्यो। उनकी आमा घर खर्च ऋण लिएर गाई किनेर दूध बेच्छिन्। उनकी बहिनी फतिमा गार्मेन्टमा काम गर्छिन्।
तर बेरोजगार राहुल जागिर खोजेर थाकिसकेका छन्। नियमित रुपमा साइबर क्याफेमा आउने-जाने क्रममा राहुलको भेट आफ्नै समकालीन अरिफसँग हुन्छ। हिंसात्मक धार्मिक अतिवादी समूहका सदस्य अरिफसँगको भेट निकटतामा बदलिएसँगै राहुलको जीवनमा पनि परिवर्तन आउन थाल्छ। राहुल र उनको परिवारमा त्यो परिवर्तनको असर कतिसम्म र कस्तो पर्ला?
'रनवे' को मुख्य कथा यही हो। यो कथा भन्न निर्देशकले कुनै ठूलो नाटकीय घटना बुनेका छैनन्। सरल र स्वभाविक रुपमा भनिएको यो कथाले बंगलादेशी राजनीति, धार्मिक हिंसा र युवा पुस्ताको भविष्यबारे सोच्न बाध्य बनाउँछ। फिल्म बंगलादेशमा भएको सन् २००५ आसपासको यथार्थपरक घटनाहरूको नजिक छ।
फिल्ममा राहुलका हजुरबुबा हरेक दिन आफ्नै छानामाथि उड्ने हवाईजहाजको आवाजसँगै छोरालाई सम्झेझैं गर्छन्। राहुलकी आमा श्रीमानको बाटो त हेर्छिन् तर आफ्नो काम रोक्दिनन्। बहिनी पनि आफ्नो तर्फबाट योगदान दिन्छिन्। यी पात्रका गतिविधिले बंगलादेशको घेरा नाघेर दक्षिण एसियाली मानिसहरूको कथा भनेको हो कि झैं बनाउँछ।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर (२००९), निर्देशक: मुस्तफा सरवार फारुकी
यो लैंगिक मुद्दामा बनेको शक्तिशाली फिल्म हो। फिल्मको यही विशेषताका कारण फिल्म सेन्सरबोर्डको झमेलामा परेको थियो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा प्रदर्शन भई प्रशंसा र पुरस्कार पाएको 'थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर' चर्चित बंगलादेशी लेखक मुस्तफा सरवार फारुकीको उपन्यास 'तीन परवर जीवन' मा आधारित छ।
फिल्म रुबा नामकी महिला पात्रको वरिपरि घुम्छ। परम्परागत मुस्लिम महिलाभन्दा फरक र स्वतन्त्र ढंगले बाँच्न चाहने रुबा 'लिभिङ टुगेदर रिलेसनसिप' मा हुन्छिन्। तर जब उनका 'पार्टनर' एउटा हत्याको अभियोगमा जेल जान्छन्, उनको स्वतन्त्रता संकटमा पर्छ। रुबाका बुबाको मृत्युपछि आमा पूर्वप्रेमीसँग बसेकीले उनी आफ्नो घर जान सक्दिनन्। न त आफ्नो जीवनसाथीको परिवारले नै उनलाई स्वीकार्छ।
बाटोमा ढुक्कसँग हिँड्न, एक्लै बस्ने कोठा खोज्नदेखि जागिर खोज्नसम्म उनले संघर्ष गर्नुपर्छ। यत्तिमै उनको संघर्ष कहाँ सकिन्छ र?
रुबाको संघर्षमार्फत फिल्मले बंगलादेशी समाजका धेरै विकृत्ति उदांगो पारिदिन्छ। फिल्मको यो सबैभन्दा सबल पक्ष हो। फिल्मको कथा सरल भए पनि नयाँ शैलीमा कथा निर्देशकको रोजाइले रोचक बनाएको छ। संकटको हरेक घडीमा कठोर निर्णय गर्न सक्ने बलियो महिला पात्रको भूमिकामा नुशरत इमरोज तिशाको अभिनयले पनि फिल्म बलियो बनाएको छ।
मातिर मोइना (२००२), निर्देशक: तारेक मसुद
यो फिल्ममा सन् १९६० को परिवेशको पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) को सन्दर्भ उतारिएको छ। फिल्मको केन्द्रमा बालक अनु र उनको परिवारको कथा छ। एक समय बेलायती शैलीको जीवन बाँच्ने अनुको बुबा काजी कट्टर धार्मिक व्यक्तिमा बदलिएका मुसलमान हुन्। काजीका भाइ वामपन्थी राजनीतिमा लागेका युवा हुन्। बुबाले अनु आफ्नो काकासँग हिन्दु धार्मिक उत्सवमा सहभागी भएको रुचाउँदैनन्। छोराले बाटो नबिराओस् भनेर उनी अनुलाई मदरसामा पढ्न गाउँभन्दा पर पठाउँछन्।
होमियोप्याथी औषधि बेच्ने काजी आफ्नो छोरी बिरामी हुँदा पनि एलोप्याथी औषधि प्रयोग गर्न मान्दैनन्। काजीको जिद्दीले छोरालाई परिवारबाट टाढा पठाइएकोमा अनुकी आमा असन्तुष्ट हुन्छिन्। अझ, काजीकै संकीर्णताले छोरी गुमाउनु पर्दा उनी आहत हुन्छिन्।
मदरसामा अनु त्यहाँका केटाहरूले हेप्ने अर्को बालक रोकोनसँग नजिक भए पनि त्यहाँको वातावरणमा एक्लो उनी एक्लो महशस गर्छन्।
फिल्ममा अनुको जीवन र उनको परिवारमा आउने उतारचढाव सँगै तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम पनि क्रमशः जोडिएको छ। बंगलादेशको जन्म हुनुअघिको त्रासदीपूर्ण समयको कथा भन्ने यो फिल्मले धार्मिक अतिवाद र पूर्वाग्रहमाथि तीखो व्यंग्य गर्छ। सामान्य घटनाक्रम मार्फत बिस्तारमा सामाजिक राजनीतिक कथा भनिएको यो फिल्ममा काजीको हठका कारण बन्दीझैं उकुसमुकस जीवन बाँच्न बाध्य अनुकी आमाको छटपटीलाई पनि मिहीन रूपमा देखाइएको छ।
सन् २००२ मा प्रतिष्ठित कान्स महोत्सवमा समीक्षकको रोजाइमा पुरस्कृत यो फिल्म बंगलादेशी उत्कृष्ट फिल्ममध्ये एक मानिन्छ। वृत्तचित्र र छोटा फिल्म बनाएर चर्चा कमाएका मसुदको यो पहिलो फिचर फिल्म हो।
मसुदको ५४ वर्षको उमेरमा सन् २०११ मा सडक दुर्घटनामा निधन भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाएका मसुदका वृत्तचित्र काठमाडौंमा आयोजना हुने दक्षिण एसियाली वृत्तचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन र पुरस्कृत भएको छ। यो महोत्सवमा डेब्यू निर्देशकलाई मसुदकै नामको एक हजार डलरको तारेक मसुद पुरस्कार समेत वितरण गरिन्छ।
उत्कृष्ट ५ इटालियन फिल्म, युट्युबमा अंग्रेजी सबटाइटलसहित
ऋषि कपुरका ५ यादगार फिल्म, युट्युबमा
१० राम्रा छोटा नेपाली फिल्म, युट्युबमा
ओस्कार जितेका १० छोटा फिल्म, युट्युबमा
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७, १९:२५:००